बैंकहरूको रक्तसञ्चार - विचार - कान्तिपुर समाचार
श्रावण ५, २०७६ दुर्गा कँडेल (छत्कुली)
निक्षेपकर्ताको निक्षेप रकम माग गर्दा भुक्तानी दिन नसके साख खस्किने र यसको असर समग्र बैंकिङ प्रणालीमा तुरुन्त देखा पर्ने हुनाले बैंकले तरलता व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । सम्पूर्ण वित्तीय प्रणालीको तरलता व्यवस्थापन सुदृढ हुन सके मात्र समग्र अर्थतन्त्र सही गतिले चलायमान हुन्छ ।
त्यसैले तरलतालाई बैंकहरूको रक्तसञ्चार भनिन्छ । बैंकहरूलाई कहिले अधिक तरलता भई कहाँ लगानी गरौं त कहिले त्यसको अभाव भई कसरी साधनको जोहो गर्न सकिएला भन्ने छटपटी देखिन्छ । आखिर यो सबै किन र कसरी ? समाधानको उपाय के होला ? यिनै प्रश्नको उत्तर तथा यसको उचित व्यवस्थापन नै तरलतासम्बन्धी जोखिमको व्यवस्थापन हो ।
हाम्रो वित्तीय बजारमा तरलता निकै अस्थिर हुने गर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता उतारचढाव हुने प्रमुख कारणलाई समष्टिगत आर्थिक तत्त्व र सूक्ष्म वित्तीय संस्थाविशेषका तत्त्वमा विभाजन गरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रको तरलतालाई प्रभाव पार्ने प्रमुख तत्त्व हो– खुद वैदेशिक सम्पत्ति । तरलता विप्रेषणमुखी छ । विप्रेषण आप्रवाह घटे घट्छ, बढे बढ्छ । सरकारले गर्ने खर्च एवं संरचनाले पनि बैंकिङ तरलतामा असर पुर्‍याउँछ । सरकारले केन्द्रीय बैंकसँग कर्जा लिएर खर्च गरे अर्थतन्त्रमा तरलता बढ्छ, राजस्व तथा आन्तरिक ऋणबापत संकलित रकम खर्च गर्न सकेन भने संकुचन हुन्छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले योजनाअनुरूप कर्जा तथा निक्षेप बढाएका हुन्छन् । निजी क्षेत्रबाट अत्यधिक कर्जा माग भएका बैंकले न्यून तरलताको अवस्थामा पनि लगानी बढाउँदा तरलता घट्छ । समयमा साउँब्याज असुल नहुँदा तरलता समस्या अझ ठूलो हुन्छ ।
मुद्रास्फीतिका बेला जनताको आय जीवन निर्वाहमै सकिँदा बचतको अंश कम हुन गई तरलता अभाव हुन्छ । नेपालका सन्दर्भमा भने मुद्रास्फीतिको समयमा पनि तरलता बढ्ने गरेको छ । यस्तो हुनु भनेको विप्रेषणको प्रभाव हो तर उत्पादनशील क्षेत्रमा विप्रेषणको प्रयोग नहुन्जेल तरलतामा सकारात्मक प्रभाव देखिँदैन ।
अस्थिर राजनीतिक वातावरण, सामाजिक सुरक्षा अवस्था, आर्थिक परिसूचकमा विचलन, शान्ति–सुरक्षामा हुने परिवर्तनबाट पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पर्छ । निक्षेप पर्याप्त भए पनि लगानी बढ्न नसक्दा र लगानीको प्रतिफल पाउने स्थिति नहुँदा तरलतामा विचलन आउँछ । नेपाल–भारत खुला सीमा हुनु, छिमेकी मुलुकमा ब्याजदर बढी हुँदा वा लगानी बाहिरिने सम्भावना हुँदा पनि हामीकहाँ तरलता अस्थिर हुने गर्छ ।
वित्तीय कारोबारको ठूलो अंश अझै पनि नियमनकारी निकायको पूर्ण दायरामा आउन सकिरहेको छैन । केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिले पनि बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यी उपकरणभन्दा पनि खुला बजारको सञ्चालन प्रभावकारिताले बजारको तरलतामा प्रभाव पार्ने गरेको छ ।
नेपालका प्रायः बैंकको निक्षेप योजना र कर्जा लगानी नीति एकै प्रकारको छ । निक्षेप तथा कर्जाको अवधिको उचित सन्तुलन मिलाउन नसक्ने वित्तीय संस्था तरलता अभावमा पर्ने निश्चितप्रायः हुन्छ । त्यसको प्रभाव समग्र वित्तीय बजारमा पर्छ ।
बैंकिङ क्षेत्रमा सम्पत्ति दायित्वको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा पनि तरलतामा उतारचढाव आउने गर्छ । विभिन्न समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आउने समस्या, संस्थागत सुशासन, बदमासी गर्ने व्यक्तिमाथि कारबाही आदि कारणले निक्षेपकर्ताको मनोविज्ञानका कारण तरलता स्थिर रहन पाउँदैन । वित्तीय संस्थामा तरलता जोखिम पहिचान, अनुगमन, मापन र नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भमा कमीकमजोरीका कारण अधिक तथा न्यून तरलताको स्थिति समयसमयमा आइरहेको हुन्छ ।
तरलता उतारचढावको व्यवस्थापन
तरलतालाई मौद्रिक उपकरणका माध्यमबाट एउटा वाञ्छित सीमाभित्र राख्न सके नकारात्मक असर हुँदैन । समयमा नियन्त्रणमा राख्न सकिएन भने यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउन सक्छ । बैंकहरूको निक्षेपको वर्गीकरण तथा कर्जा लगानीलाई भुक्तानीका आधारमा विश्लेषण गरी समग्र प्रणालीमै ‘ग्याप एनालिसिस’ गर्ने संयन्त्र बनाउनुपर्ने हुन्छ ।
लगानीका नयाँ क्षेत्र पहिल्याउनु र उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा लगानी गर्नु उत्तम हुन्छ । हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आयातमुखीबाट निर्यात प्रतिस्पर्धी बनाउनु जरुरी छ । देशमा लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न ढिला भइसकेको छ । तसर्थ विद्यमान ऐन, कानुन, नीति–नियममा समेत आवश्यक परिमार्जन गर्नुपर्छ ।
भोलिका दिनमा मौद्रिक नीतिमार्फत ब्याजदर कोरिडोरलाई व्यवस्थित गर्न र अनिवार्य नगद मौज्दातभन्दा बढी रकममा तथा अधिक तरलतामा ब्याज दिन सके बैंकिङ क्षेत्रको तरलता व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ । समस्याग्रत संस्थाका निक्षेपकर्ताले आफ्नो बचत रकम सजिलै पाउन सक्ने प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रति सचेतना जगाई छाया बैंकिङलाई अनुगमनको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।
तरलता कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बढी त कुनैमा कम भई व्यवस्थापनमा कठिनाइ हुने गरेको छ । यसका पछाडि पक्कै विभिन्न समष्टिगत र सूक्ष्म कारण छन् । यिनको खोजी गरी विश्लेषण हुनु तरलता व्यवस्थापन तथा असमान तरलताको निदानका लागि अति आवश्यक छ ।
मौद्रिक बजारलाई स्वच्छ र पादरर्शी रूपमा चलाउन उपयुक्त र वैज्ञानिक सूचना प्रणालीको विकास, लगानीका लागि आवश्यक उपकरण, बजार अनुगमन र नियन्त्रण प्रणाली, ब्याजदर लगानी नीतिको समयसापेक्ष पुनरावलोकन पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ ।
सम्भव उपायहरू अवलम्बन गर्दै समग्र वित्तीय प्रणालीलाई संस्थागत सुशासनमा ल्याउनु आवश्यक छ । मानव शरीरमा रक्तसञ्चारको जुन भूमिका छ, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा तरल सम्पत्तिको पनि त्यति नै आवश्यक हुन्छ ।
लेखक राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमा कानुन, जोखिम व्यवस्थापन तथा कर्जा अनुगमन विभागकी प्रमुख हुन् । प्रकाशित : श्रावण ५, २०७६ ०७:४२
अक्टोबरमा मलेसियामा भएको एसियाको विश्व ट्वान्टी–२० छनोटको पहिलो खुडकिलो इस्टर्न रिजन नेपाललाई जित्न खासै अप्ठेरो परेको थिएन । शीर्ष तीनमा रहँदै नेपाल, सिंगापुर र मलेसिया अहिलेको प्रतियोगितालाई छनोट भएका हुन् । विजेता बन्नेक्रममा नेपालले मलेसियामाथि ८ विकेटको विजय हात पारेको थियो भने सिंगापुरसँगको खेल रद्द भएको थियो । सिंगापुरलाई नेपालले ८१ रनमा अलआउट गरेपछि खेल वर्षाले प्रभावित रहेको थियो ।
वेस्टर्न रिजनबाट यूएई, कतार र कुवेत शीर्ष तीन स्थानमा रहँदै सिंगापुरलाई छनोट भएका थिए । विश्व ट्वान्टी–२० ग्लोबल छनोट यूएईमै खेल्नुपर्ने भएकाले यूएईलाई आयोजकका हिसाबमा छनोट गराइयो र टोलीले सिंगापुरको छनोट प्रतियोगिता नखेल्नुपर्ने भयो । कतार र कुवेत पनि नेपालको स्तरमा कमजोर टोली हुन्, त्यसैले नेपाललाई प्रवल दाबेदारका रूपमा उभ्याएको हो । नेपालले २०१४ मा बंगलादेशमा विश्व ट्वान्टी–२० नै खेलिसकेको छ । जबकि नेपालले खेल्ने लागेको अन्य चार टोली अहिलेसम्म ग्लोबल छनोटमा पनि पुगेका छैनन् ।
अपडेटः बुधबार, २१ जेठ, २०७७ । १० : १५ बजे